Fikarohana momba ny firaisana Karma ao amin'ny Xenoglossy Tantaram-piainana Tantaran'ny vehivavy Alemana - Fikarohana momba ny vatana teraka
Ahoana no nahatonga izany? Fandresena amin'ny fiainana taloha
Mpikaroka: Ricne Galitain
Vehivavy Alemà Mahantra Miresaka Amin'ny Fiainam-piainana Fahiny: Frantsay
Ity tranga ity dia miverina amin'ny 1862, raha nantsoina hoe Ricne Galitian, mpihatsaravelatsihy any Hamburg, Alemaina, dia nihatsara ny fahantrana nahazo ny alemana izay nanomboka niteny frantsay. Ilay vehivavy alemà dia tsy nahalala Frantsay, kanefa nanoritsoritra ny zava-niainan'ny fiainana teo aloha tamin'ny teny frantsay tsara indrindra. Tao amin'ny fahatsiarovan-tena mahazatra azy dia tsy afaka niteny afa-tsy Alemana ihany izy.
Karma avy amin'ny fiainana taloha frantsay: Vehivavy no nandefa ny vadiny niala ny Cliff
Ilay vehivavy dia namaritra ny fisehoan-javatra teo amin'ny fiainana teo aloha izay nanafahany ny vadiny tamin'ny fanosehana azy teo amin'ny hantsana iray. Nomeny ny fahantrany ho karma mifandraika amin'io fihetsika io.
Na dia tsy voamarina aza ny fahatsiarovan-tenan'ny vehivavy alemà taloha, dia azo lazaina ny tatitra momba ny xenoglossy, satria izy io no iray amin'ireo tantara voalohan'ity tranga ity.
Raha raisina ho toy ny raharaha momba ny fanambadiana amin'ny maty izy io, dia maneho ireto toetra manaraka ireto:
Xenoglossy: Ny vehivavy alemà tamin'io tranga io, izay nahantra sy tsy nahita fianarana, dia afaka niteny Frantsay rehefa nihanihany izy, saingy tamin'ny fahatsiarovan-tenany dia niteny alemà fotsiny izy.
Fiovam-pirenena: Ity tranga ity dia mampiseho fa ny olona iray dia afaka manova ny zom-pirenena avy amin'ny fampodiana amin'ny iray hafa, avy amin'ny Frantsay nandritra ny fiainany taloha tany Alemana nandritra ny androm-piainany.